निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लागु गर्ने सरकारको तयारी - नेपालबहस
निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लागु गर्ने सरकारको तयारी
२६ जेठ २०७८ | १२:३७:१६ मा प्रकाशित
२६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्न थालेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।
जेठ मसान्तमा निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लगाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तर निजीको हकमा भने जोर विजोर गराउनेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ ।
यद्यपि तत्काल सार्वजनिक सवारी चाहिँ चल्न दिनु नहुने तीनै जिल्लाका प्रमुखको निष्कर्ष छ । निषेधाज्ञाको मोडालिटीको विषयमा २९ जेठमा निर्णय हुने समेत बताइएको छ । निषेधाज्ञा उलङ्घन गर्दै यही २० गतेदेखि भने मुलुकभर नै मानिसको चहलपहल बढेको पाइएको छ । यातायातका साधनसमेत बाक्लिएका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने अहिले नै लपरवाही नगर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् । जोखिम कायमै रहेकाले अझै एक महिना विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्रालकले जनाएकाे छ ।
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध ८ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति निश्प्रभावी, धेरै राष्ट्रले पत्रको जवाफ समेत फर्काएनन् २७ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ३७ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ३९ मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? ५९ मिनेट पहिले
भर्चुअलरूपमा बेलायती महारानीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश ६ दिन पहिले
बझाङमा गहुँ उत्पादनमा ह्रास ३ हप्ता पहिले
डेबिट/क्रेडिट कार्ड के हो ? कसरी प्रयोग गर्ने ? ७ दिन पहिले
कर्णाली प्रदेश सभा बैठक आज पनि बस्दै ७ दिन पहिले
कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १४७४ पुग्याे ११ महिना पहिले
बजेट पढ्दा अथर्मन्त्रीलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो ! १ वर्ष पहिले
प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको वैशाख ३ गते संसदीय सुनुवाइ २ महिना पहिले